Calligra 2.9, iyo vhezheni itsva yeiyi yakazara hofisi suite | Linux Vakapindwa muropa
Calligra 2.9 yakagadzirira kurodha pasi
Mazuva mashoma apfuura vhezheni itsva yeiyi inozivikanwa hofisi suite yakavhurwa, Calligra 2.9. Iyo nyowani vhezheni ine zviuru zveshanduko zvine chekuita nevakatangira, iine mashandiro matsva, gadziriso kugadzirisa uye nekuvandudza maererano neyakaitika mushandisi. Calligra 2.9 inogona kunge iri imwe nzira kuLibreOffice kana usiri kufarira ino yazvino hofisi suite.
Calligra akaberekwawo sa Koffice forogo, iyo KDE hofisi suite, senge OpenOffice uye LibreOffice. Chokwadi ndechekuti Calligra ine anonakidza mafomu uyezve inotsigira Microsoft Office mafomati, senge LibreOffice (kunyangwe nekutadza inoshandisawo OpenDocument).
Ehe saizvozvo yemahara uye yemahara software yakagadzirirwa neboka re KDE. Y nekutsamira paQt, inogona kuendeswa kune mamwe mapuratifomu, unogona kuiisa pane chero Linux distro, FreeBSD, Mac OS X, Windows uye kunyangwe paApple mafoni uye matafura (Calligra Active, yaimbozivikanwa seCalligra Mobile).
Kune avo vasingazive Calligra Suite, izvi zvakare zvakakamurwa kuva akasiyana software software kana kunyorera. Uye ndeaya:
Mazwi: izwi processor rakaenzana LibreOffice Munyori kana Microsoft Word.
Mapepa spreadsheet iyo inogona kuve imwe nzira kune LibreOffice Calc Microsoft Excel.
Nhanho: chirongwa chekugadzira mharidzo senge LibreOffice Impress kana Microsoft PowerPoint.
Kexi: dhatabhesi kutsiva LibreOffice Base kana Microsoft Access.
Urongwa: maneja weprojekiti kugadzira Gantt machati.
Brain dump: kumwe kunyorera kwekugadzira zvinyorwa uye mepu dzemepfungwa.
Kuyerera: chirongwa chekudhirowa yekugadzira inoyerera inoyerera ine simba rinoremerwa rinoremerwa stencils.
Carbon: mudziyo wekuveza vector.
Krita: yekugadzirisa uye kushandisa raster mifananidzo.
Author: Yakakosha app yekugadzira e-mabhuku akafanana neBook Munyori.
Kana iwe uchifarira ino yakazara hofisi suite, iwe unogona kurodha pasi kubva pawebhusaiti yepamutemo kana kuiwana muApp Store yako, software centre, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Calligra 2.9 yakagadzirira kurodha pasi
Ndingaite sei kuti ndiwane bhuku kana dzidziso muSpanish, yechirongwa chekarbon, ndinokutendai zvikuru pamberi
Pindura kune roesmu62r
Kune windows kune chete Calligra Gemini? Haugone kushandisa chirongwa cheCalligra?
Linux Hardenining: matipi ekuchengetedza yako distro uye nekuita kuti ive yakachengeteka
Xiaopan OS: kugovera kunoitirwa kuongorora maNetwork eWiFi